Fiainan’ny Mpiasa Filipiana Ao Anatin’ny Hosodokon’i Antipas ‘Biboy’ Delotavo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2015 9:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, čeština , عربي, Español, 繁體中文, 简体中文, English
“Itak sa Puso ni Mang Juan” (Sabatra ao am-pon'i Mang Juan). Lokorano amin'ny Taratasy, 1978. Nahazoan-dalana ny famoahana indray ny sary.
Ho fanomezam-boninahitra ny Andro Iraisampirenen'ny Mpiasa, mampiseho sary hoso-doko maromaro izay maneho ny toerana iainan'ny mpiasa Filipiana ny Global Voices.
Mpanakanto Filipiana mpaneho kanto hita maso malaza i Antipasy “Biboy” Delotavo izay nanao ny sangan'asany amin'ny fanehoana ny sasany amin'ireo zavamisy sarotra iainan'ny olo-tsotra ao amin'ny fiarahamonina Filipina. Milahatra miaraka amin'ny zavamisy ara-tsosialy hafa izay maneho ny lafy ratsy ny didy jadona tamin'ny taona 1970, mbola manohy mamokatra hoso-doko manazava amin'ny vahoaka momba ny fiantraikan'ny fahantrana, ny fampahoriana ary ny tsy rariny ao amin'ny firenena izy.
Nanasongadina mpiasa iray tranainy mandeha eo anoloan'ny fangon'ny orinasa marorantsana iray (jereo ny sary etsy ambony) ny iray amin'ireo sangan'asany malaza idrindra. Mamaritra izany ho toy ny “fanombohana ny mpitrongy vao homana amin'ny hao fijaliana ataon'ny rafitra kapitalista izany” ireo tsikera sasany.
Nanontany azy momba ny aingam-panahiny ny Global Voices, hoy i Biboy:
Ny ankamaroan'ny sanganasa miavaka dia avy amin'ny saina finaritra manainga fanahy azy. Toa mifanohitra amin'izany ny kantoko. Ny vesatra ara-tsosialy no nanombohako izany ary mitady voitra aho amin'ny alalan'ny fanaovana hosodoko izany. Tsy dia haiko loatra hoe aingam-panahy ve izany. Mihevitra aho fa andraikitra kokoa amin'ny maha-olona ara-tsosialy manana ny feon'ny fieritreretana izany.
Ity ny soso-kevitr'i Biboy hoan'ireo tanora mpanakanto:
Izay foroninao amin'ny maha-mpanakanto no mampiseho hoe iza ianao. Raha mandoko noho ny vola fotsiny na zavatra hafa ianao, dia hampiseho izany tokoa izy. Fahadiovam-po, faharesen-dahatra, firehetam-po sy talenta no fangaro mahazatra amin'ny fiaretana ny asan'ny mpanakanto.
Maneho ny fifindra-monina faoben'ireo mpiasa Filipiana ity sary hosodoko ity. 12 tapitrisa ireo mpiasa Filipiana any ampitan-dranomasina izay nandao ny namany sy ny fianakaviany.
Am-pielezana. Menaka amin'ny lamba, 2007. Nahazoan-dalana.
Manam-pahaizana momba ny kanto, Patrick D. Flores nilaza momba io hosodoko io:
Miatrika faravodilanitra izay toa diso toerana izy ireo, saingy misy vokany azo tsapain-tanana ny fandrosoan'izy ireo, mampifikitra azy ireo amin'ny taniny ny entana entiny, ary vonona izy ireo “ho eo” sy hanjavona ho any amin'ny lalina. Tonga ve ry zareo sa handeha? Moa ve ao amin'ny toera-piondranana midadasika izy ireo sa ao eo amin'ny kianja fidinana sy fiakaran'ny fiaramanidina hanenjika ny sidin'izy ireo sa efa tonga?
Ahitana mpiasa tsy ara-dalàna marobe tahaka ny mpivarotra eny an-dalambe izay matetika iharan'ny herisetran'ny manam-pahefana ao Filipina.
Bawal Hanapbuhay (Tsy Azo Ivarotana). Watercolor, 1978. Nahazoan-dalana.
Misy ny tsy fitoviana goavana amin'ny fidiram-bola eo amin'ny faritra ambanivohitra sy an-drenivohitra. Maro ireo mpamboly miaina fahantrana miverimberina izay manery azy ireo hifindra monina any an-tanàndehibe.
Menaka amin'ny Lamba, 2012. Nahazoan-dalana.
Mpitsikera kanto iray namariparitra ity sangan'asa ity ho fampahatsiahivina ny “fiantrana sandoka nomen'ireo mpanafika Amerikana hoan'ireo Filipiana, 100 taona lasa izay, mbola mamely antsika amin'izao fotoana izao ny vokatr'izany.” Zanatany Amerikana i Filipina nanomboka ny taona 1898 ka hatramin’ny 1946.
Kofehy Fotsy. Menaka amin'ny Lamba, 2011. Nahazoan-dalana.
Nanjary mahazatra mandritra ilay antsoina hoe “Ady amin'ny Mpampihorohoro” ny sarin'ady eo amin'ny tafika Filipina sy Amerikana taorian'ny fanafihana 11 septambra tao New York City.
Nomen'i Etazonia anay i John Wayne. Menaka amin'ny Lamba, 2003. Nahazoan-dalana.
Ity sary hosodoko ity dia nofaritan'ny tsikera iray ho manondro ny “hamaroan-karena ambonin'ny sainam-pirenena Filipina rovidrovitra.”
Hala-Piainana. Menaka amin'ny Lamba, 2008. Nahazoan-dalana.
Nahazoan-dalana avokoa ny sary rehetra avy amin'i Antipas “Biboy” Delotavo.